Mpamatsy fanafody & Factory - Mpanamboatra fanafody any Sina
Fisehoana: vovoka crystasl fotsy Fahadiovana (Titration): 99,5% min Rano: 0,5% max [Fe3 +]: 5ppm max [SO4 2]: 10ppm max [Cl]: 10ppm max vy mavesatra: 5ppm max 25kg / amponga, 9Mt / FCL Non -mba fitaovana mampidi-doza ☑ Ny buffer Tris dia tsy vitan'ny hoe solvent ho an'ny asidra nukôlika sy ny proteinina, fa manana fampiasa lehibe koa. Tris dia nampiasaina tamin'ny fitomboan'ny kristaly proteinina teo ambanin'ny fepetra pH samy hafa. ☑ Ny tanjaka ionic ambany amin'ny buffer Tris dia azo ampiasaina hamoronana fibre lamin'ny mpanelanelana amin'ny C. elegans. ☑ T ...
☑Manelanelana amin'ny syntetika biolojika; ☑ Famporisihana polyurethane ho an'ny foam-semi-rigid sy foam-foam; ☑ Fanafainganana ny dicyandiamide na ny mpitsabo mpanasitrana anhydride; Ny sira ialDialkylimidazolium dia azo alaina amin'ny alikaola 1-Methylimidazole. Ny karazana sira dia mifandraika amin'ny reagent alkylation sy anion. Betsaka ny rano ionic azo azo avy amin'ity fihetsika ity; ☑N-methylimidazole dia akora ilaina amin'ny famolavolana ireo mpanelanelana amin'ny fanafody, izay ampiasaina hanomanana losartan, nitazofenone an ...